Tsy simba ny toro-lalana shower. Nahoana ny Vitality no manandrana manamboatra azy ireo?
Home / Interior design / Tsy simba ny toro-lalana shower. Nahoana ny Vitality no manandrana manamboatra azy ireo?
2020 / 09 / 26 FisokajianaInterior design 5667 0
Tanjona tsotra ny mandat ny fahefana. Ny tiako holazaina dia hoe tena mila fehin-kibo mifono ao DC milaza amintsika ny fomba marina hamoronana fandroana ve isika?
Na izany aza, toa halaim-panahy mety ho an'ny Diviziona Vitality any Etazonia ny manary ny bokin'andraikitra amin'ny fametahana efitrano fandraisam-bahiny (ary tsy azoko atao ny mieritreritra fa hikarakara an'io aho), azafady, azafady, azafady, biraon'ny manampahefana, aza Mifandraisa an'io mandat io amin'ny fihenan'ny fikorianana.
Ny fizarazaran-tany dia maniry ny hamaha ny fehezan-dalàna izay mametra ny fivezivezena amin'ny showerheads ka hatramin'ny 2.5 litatra isa-minitra. Ny lalàna dia nanomboka tamin'ny boky nanomboka ny taona 1992, na izany aza, tamin'ny 2013, ny governemanta Obama dia nanazava fa tsy tokony hivezivezy mihoatra ny 2.5 litatra isa-minitra ny filoham-pirenena.
Ankehitriny, nilaza ny fitondrana Trump fa mila 2.5 litatra isaky ny nozatra - izay midika fa ny loha fandroana misy vazaha 4 dia mety hiparitaka hatramin'ny 10 litatra isa-minitra.
Fiovana goavambe izany - ary iray izay mety hitondra an'i Arizona (sy ny sisa amin'ny firenena, noho ny tsy fahampian'ny rano amin'ny toerana maro samihafa) amin'ny lalana tsy misy tomika.
Izany no fomba itehirizan'ny ankamaroantsika rano
Fantatro. Na dia ny Diviziona Vitality aza dia tokony hanao an'io fiovana io, dia azo inoana fa tsy hiova be izany, na dia kely noho ny voalohany aza. Ny ankamaroan'ny showerhead vaovao eny an-tsena dia efa mivezivezy 2 litatra isa-minitra na latsaka kely kokoa.
Na izany aza ny olana ara-dalàna, vokatry ny fandehan'ny fotoana dia nanosika ny mpamokatra hamorona endrika endrika sariaka ny tontolo iainana fa tsy amin'ny showerhead fotsiny. Ny fantsom-pandroana sy ny fandroana - izay mampiasa rano fanampiny ao an-trano, mahazatra, isan'andro ao amin'ny metro Phoenix noho ny fandroana - dia nitondra fiovana lehibe teo amin'ny fiasa, noho ny mandat mifandraika amin'izany.
Mety ho antony lehibe mahatonga antsika any amin'ny metro Phoenix hampiasa rano kely kokoa ao an-trano noho ny taloha elabe teo aloha. Tsy amin-kery, tsy amin'ny fanentanana ny mpandoa hetra, na izany aza amin'ny fanoherana. Tapaka ny fitaovana iray, manomboka mitete ny loha fandroana iray, ary mankany amin'ny fivarotana izahay hividy mannequin vaovao vaovao izay somary miseho ho sariaka kokoa amin'ny tontolo iainana noho izay ananantsika - ny fitsitsiana rano amin'ny fanovana be ny fitondran-tenanay.
Tsotra kokoa sy mora vidy kokoa koa ny miova amin'ny fandroana (nividy mannequin voamarina WaterSense ho an'ny koveta fandroana azonay ambany noho ny 40 $) izahay noho ny fanovana ny fandroana fandroana na ny fanasana vilia - izay azo inoana fa manazava ny antony mahatonga ireo mari-pamantarana mahomby rehetra, Ny tanànan'ny metro Phoenix dia mihaona azy ireo fotsiny ho an'ny showerheads, ho valin'ny fikarohana tany an-tany namoaka rano 12 volana farany.
Raha avelan'ny governemanta federaly hametraka lamaody mangetaheta rano bebe kokoa eny an-tsena ny governemanta federaly, dia mety hamoy ny sasany amin'ireo tahiry ara-bola azontsika amin'ity fomba ity isika. Izay mety toa midika ho mandate mampanaintaina sy manahirana kokoa ho an'ny mponina.
Nix ny mandat izao, mandoa vola avy eo
Ny Vitality Division dia nilaza fa ny olona tsirairay dia mila malalaka manapa-kevitra amin'izay karazana showerhead ilainy hividianana izany - izany hoe izay manondraka ny fandroan'izy ireo 10 litatra isa-minitra na iray izay hahatonga anao ho lena sy hamelombelona indray miaraka amin'ny 2.5.
Ary, azo antoka, ny metro Phoenix dia mety tsy maintsy mandeha lavitra noho ny famolavolana fitaovana mora amin'ny taona ho avy mba hamonjy rano be dia be satria manome rano ny reniranon'i Colorado. Na dia hanandrana hanemotra ny mandat intrusive mandritra ny fotoana maharitra aza ny tanàna, tsy azontsika atao ny manalavitra azy ireo - indrindra raha tokony hitahiry rano maromaro isika ao anatin'ny fotoana fohy.
Na izany aza, misy ny mandat, ary misy ny mandat - ireo somary madinidinika izay manao ny asany amin'ny sahirana be sy ny lakilen'ny fanalahidy mety hanimba ny andron'ny olona iray.
Ao anatin'ny tetik'asa lehibe mifehy ny lalàna, dia ambany ny mandats an'ny shower. Ireo fepetra takiana dia nisondrotra mialoha ny fotoana ary azo atao tsara ho an'ny mpamokatra maro, mieritreritra fa ny maro an'isa dia efa mihoatra ny ilaina.
Mandefa ny hafatra marina momba ny fampiasana rano izy ireo - voafetra sy sarobidy izany - amin'ny fanaovana sorona betsaka amin'ny fomba fampisehoana tsara indrindra. Tsy afaka nampahafantatra fahasamihafana teo amin'ny loha-doka vaovao sy ambany kokoa aho ary ny mannequin namana tsy dia tsara loatra nanova ny tontolo iainana (ankoatr'izay dia mampiasa 20% kely noho ny rano isaky ny fandroana).
Ka, na dia miresaka momba ny fahalalahana sy mampihena ny jaky mena aza, dia tsy simba ny fitsipi-pifehezana ankehitriny.
Raha mandehandeha azy io indray isika izao dia handoa bebe kokoa isika avy eo.
Previous :: Ireo fanavaozana trano ireo dia manana ROI ratsy indrindra Next: Nanonona £ 4,000 i Neny mba hamerenana amin'ny laoniny ny trano fidiovany toa reraka dia nanao izany ho an'ny 45 pounds
2020 / 12 / 05 2511